လအနည်းငယ်ကအနှီးလေးထုတ်ပြီးချီခဲ့ရပေမယ့် အခု ခြေထောက်လေးတွေပါစမ်းထောက်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့သမီးလေး – Askstyle
လအနည်းငယ်ကအနှီးလေးထုတ်ပြီးချီခဲ့ရပေမယ့် အခု ခြေထောက်လေးတွေပါစမ်းထောက်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့သမီးလေး
ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ရေ… ပရဟိတလုပိတဲ့နေရာမှာ ပြိုင်စံရှားမင်းသမီးတစ်လတ်လည်းဖြစ်သလို မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေဟာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းကိုခံထားရသူတစ်ယောက်ပါနော်။ လက်ရှိမှာဆိုရင် မိဘမဲ့ ကလေးတွေအတွက် သူမရဲ့ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ ကြိုးစားဖန်တီးထားပေးတဲ့ ခိုင်မိသားစုဂေဟာလေးဟာလည်း ကလေးတွေရဲ ဆည်းလည်းသံတွေနဲ့သာယာအေးချမ်းလျက်ရှိပါတယ်နော်။
သူမရဲ့ မိသားစုရိပ်မြုံလေးကို ရောက်ရှိလာတဲ့ကလေးတွေကိုလည်း မိခင်အရင်းသဖွယ်ပြုစု ဂရုစိုက်ပေးပြီး သူမရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ ကလေးတွေကို ပြူစုပျိုးထောင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်နော်။ အခုလည်း သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မီးမီးလေး ခိုင်ရွှေသွန်းမေအကြောင်းကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေကို အကြွားပိုခဲ့ပြန်ပါတယ်နော်။ မီးမီးလေးဟာ အရမ်းလည်းလိမ္မာသလို လူလည်းမကြောက်တတ်တဲ့အတွက် မေမေနဲ့ သမီးလေးကတော့ လုံးဝကိုတွဲဖက်ညီနေခဲ့ပါတယ်နော်။
” လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းလောက်တုန်းကပေါ့ ကျမရဲ့အင်တာဗျူးတွေ,ရိုက်ကူးရေးတွေမှာ ကျမသမီးလေး ခိုင်ရွှေသွန်းမေကို အနှီးလေးထုပ်ပြီးချီခဲ့ရတာ …အခုကြည့်ပါအုန်း ဂါဝန်လေးနဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ ထိုင်နိုင်နေပြီ, ခေါင်းလေးတွေကောင်းကောင်းထောင်နိုင်ပြီ, ခြေထောက်လေးတွေစမ်းထောက်နေပြီ…” ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်နော်။ “သူတို့လေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေက ကျမအတွက်အားအင်တွေပဲ. ကျမ ရဲ့ ကလေးလေးတွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ,ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ ညိုးငယ်မှုမရှိအောင်, သူတို့တွေက ကံကောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေဆိုတာသိစေဖို့ မေတ္တာတရားနဲ့ပဲသွန်သင်ဆုံးမမယ်…စိတ်ကူးထဲအတွေးတွေထဲမှာ သား/သမီးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ချက်တွေ,လုပ်ပေးချင်တာတွေအပြည့်ပဲ…” ဆိုပြီး သူမရဲ့ကလေးတွေအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ ရင်ထဲက စကားတွေကို ချစ်ပရိတ်သတ်တွေကိုပြောပြခဲ့ပြန်ပါတယ်နော်။
Source: Khine Hnin Wai,CRD-Myanmarload
ခဈြပရိတျသတျတို့ရေ… ပရဟိတလုပိတဲ့နရောမှာ ပွိုငျစံရှားမငျးသမီးတဈလတျလညျးဖွဈသလို မြိုးဆကျသဈလူငယျတှအေတှကျ ရှဆေ့ောငျလမျးပွကောငျးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခိုငျနှငျးဝဟော ပရိတျသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျအားပေးခွငျးကိုခံထားရသူတဈယောကျပါနျော။ လကျရှိမှာဆိုရငျ မိဘမဲ့ ကလေးတှအေတှကျ သူမရဲ့ မတ်ေတာတရားတှနေဲ့ ကွိုးစားဖနျတီးထားပေးတဲ့ ခိုငျမိသားစုဂဟောလေးဟာလညျး ကလေးတှရေဲ ဆညျးလညျးသံတှနေဲ့သာယာအေးခမျြးလကျြရှိပါတယျနျော။
သူမရဲ့ မိသားစုရိပျမွုံလေးကို ရောကျရှိလာတဲ့ကလေးတှကေိုလညျး မိခငျအရငျးသဖှယျပွုစု ဂရုစိုကျပေးပွီး သူမရဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတရားတှနေဲ့ ကလေးတှကေို ပွူစုပြိုးထောငျပေးနခေဲ့ပါတယျနျော။ အခုလညျး သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးတှထေဲကတဈယောကျဖွဈတဲ့ မီးမီးလေး ခိုငျရှသှေနျးမအေကွောငျးကိုလညျး ပရိတျသတျတှကေို အကွှားပိုခဲ့ပွနျပါတယျနျော။ မီးမီးလေးဟာ အရမျးလညျးလိမ်မာသလို လူလညျးမကွောကျတတျတဲ့အတှကျ မမေနေဲ့ သမီးလေးကတော့ လုံးဝကိုတှဲဖကျညီနခေဲ့ပါတယျနျော။
” လှနျခဲ့တဲ့ လအနညျးလောကျတုနျးကပေါ့ ကမြရဲ့အငျတာဗြူးတှေ,ရိုကျကူးရေးတှမှော ကမြသမီးလေး ခိုငျရှသှေနျးမကေို အနှီးလေးထုပျပွီးခြီခဲ့ရတာ …အခုကွညျ့ပါအုနျး ဂါဝနျလေးနဲ့ခေါငျးစညျးလေးနဲ့ ထိုငျနိုငျနပွေီ, ခေါငျးလေးတှကေောငျးကောငျးထောငျနိုငျပွီ, ခွထေောကျလေးတှစေမျးထောကျနပွေီ…” ဆိုပွီးပွောပွခဲ့ပါတယျနျော။ “သူတို့လေးတှရေဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုတှကေ ကမြအတှကျအားအငျတှပေဲ. ကမြ ရဲ့ ကလေးလေးတှေ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ,ရုပျပိုငျးဆိုငျရာတှမှော ညိုးငယျမှုမရှိအောငျ, သူတို့တှကေ ကံကောငျးတဲ့ကလေးလေးတှဆေိုတာသိစဖေို့ မတ်ေတာတရားနဲ့ပဲသှနျသငျဆုံးမမယျ…စိတျကူးထဲအတှေးတှထေဲမှာ သား/သမီးတှအေတှကျ ရညျရှယျခကျြတှေ,လုပျပေးခငျြတာတှအေပွညျ့ပဲ…” ဆိုပွီး သူမရဲ့ကလေးတှအေပျေါထားတဲ့ မတ်ေတာတရားတှနေဲ့ ရငျထဲက စကားတှကေို ခဈြပရိတျသတျတှကေိုပွောပွခဲ့ပွနျပါတယျနျော။